Setha i-GPS Tracker ukufinyelela amabalazwe ku-inthanethi – Taylor Lopes ツ Blog
Namuhla nge yokungazethembi lokungapheleli okunengi kangaka, izinkinga zezimali, senza konke esingakwenza ukuze angabi ukulahleka. Kodvwa lokubuhlungu nakakhulu ukuba nemoto eyebiwe, Kuyinto ukuba umkhaya enkingeni kulesi imoto, UNkulunkulu uyazi lapho. nge Tracker ngeke bakwazi avimbela ukuthi kungenzeki lokhu, kodwa okungenani ungakwazi ukusesha bese uthumela usizo ukwazi indawo esiqondile imoto.
Ngokusobala lokhu nokuzola mbumbulu has a izindleko. I Tracker uthenga i-R $ 150,00 ngokwesilinganiso, nokugcina kakade wefoni chip Iphakethe Idatha out emhlabeni R $ 10,00 nyangazonke, usebenzisa M2m System (Umshini ukuze Machine). bese, kunomvuzo noma cha? kahle, wonke umuntu uyazi lapho ukucindezela callus, okuyinto kufanele sivikelwe noma cha. Kodwa njengoba besho “nje ungayisebenzisi ngokubeka Ilokhi ngemva umnyango eziphukile”. Nganquma ukuzama ;)
Kukhona Izilandeleli izisebenzi kanye nokusetshenziswa imoto. Esimweni sami, Ngathenga TK103A (Coban), ngoba umqondo ukubeka emotweni ukuqapha izindlela ezithile ajwayelekile. Kodwa inkinga ukuthi uma uthenga i-GPS Tracker, akekho ofuna ukusondela ukuthumela imiyalo nokwamukela izixhumanisi SMS (umbhalo). Lokho akujabulisi! Ufuna ukubona “into” kungekho ibalazwe, real-time. Ngakho woza on!
I ihlolwe izinhlelo ezintathu amabalazwe intanethi ukuze crawlers. Bonke wagijimela ukwaneliseka:
1) GPS-Trace (iwolintshi – khulula).
2) TrackerHome (“iseva 1”: IP 202.104.150.75 – khulula).
3) CorvusGPS (yokukhokha – $0.02/usuku)
Babili izigaba ukumisa ukuthi uzobe kuchazwe ngezansi:
1) Ukubeka kwi-Tracker (akunakusetshenziswa, a TK103)
2) Ukubeka Site / uhlelo Web esiqukethe izixhumanisi ukukhweza amamephu.
Mina uyobonisa ukucushwa usebenzisa GPS-Trace, TrackerHome futhi CorvusGPS, Kukithi ukuba ukhethe, kodwa ngincoma usebenzisa Chip M2m GPS-Trace.
Ngaphambi kokuba uqale, cabanga ukuthi Tracker yakho (kudivayisi TK103A) usuyasebenza ngokugcwele, ngamanye amagama, Ngokwamukela imiyalo ethunyelwe nge-SMS ngumlawuli yeseli, Yini =)
Uma ungenzanga kanjalo, sibheke lokhu TK103 lemanyuwali Portuguese. Empeleni nje udinga ukwengeza inani iseli lakho esigunyazayo Tracker nokwamukela kanye ukuthumela imiyalezo.
Ukuze wenze umsebenzi konke, qiniseka ukuthi i-chip yakho ine uhlelo wombhalo (SMS) kanye nedatha (Inthanethi) kunikwe amandla. Ungakwazi ukuhlola lesi ngokubheja chip yakho (ukwenza Tracker) iseli, okwenza ukuthumela test SMS kanye navigation ngaphambi uyifake ku Tracker ukuqala izilungiselelo.
Uma ucela usizo uchwepheshe ukufaka Tracker yakho emotweni, qiniseka ukuthi uyobeka antenna GPS kanye GSM antenna engenayo Tracker, indawo efanelekayo ngaphakathi emotweni.
It has ukuba endaweni ekahle ukuze imoto izingxenye okuqinile / isizinda ngeke kudale isiphazamiso nokwehlisa isignali satellite (GPS) futhi wefoni (GSM). kungenjalo, Ukuhlolwa kuyoba kunemaphutsa ngoba Tracker abakwazi ukuthola (GPS) futhi udlulise (GSM) the kwendawo Ukudidiyela idatha kahle futhi sibonise kumephu uzobe kahle (alithembekile).
Ayikho -YouTube anezinye amavidiyo echaza lapho engcono libeke antenna.
esigabeni 1 – Ukubeka kwi-Tracker
– Lokhu kulungiselelwa le TK103A Tracker, nakuba kungase ukusebenza kweminye imihlobo efanayo.
– Ukuze oda ukuboniswa, sizosebenzisa iphasiwedi ezizenzakalelayo okungukuthi 123456, kodwa ungakwazi ukushintsha uma ufuna (Bheka ibhuku lokusebenzisa okukhulunywe ngawo ngaphambili).
– uma ufaka, ukusebenzisa ofeleba / ezincane ncamashi njengoba kukhonjisiwe kulesibonelo umyalo ngamunye.
– Beka imoto yakho endaweni evulekile (hhayi igalaji ngaphakathi)
Ngizokwenza yonke imiyalo ngokulandelana futhi, emva, siyichaze. Ngakho lapha ukumiswa okuphelele Tracker usebenzisa TK103 Chip Vivo M2m GPS-Trace Amamephu. Thumela imilayezo ye-SMS okulandelayo khukhwini wakho enombolweni chip Tracker sika:
admin123456 5561983030102 //ivumela ifoni yakho ukuthumela imiyalo. ukubuyiselwa: "admin ok!"
password123456 112233 //shintsha iphasiwedi 123456 ngoba 112233. Khetha iphasiwedi 6 idijithi
begin112233 //ukubuyiselwa: "begin ok!"
GPRS112233 //ukubuyiselwa: "GPRS OK!"
up112233 uyaphila uyaphila //ukubuyiselwa: "user,iphasiwedi kulungile!"
admin123456 5561983030102 //ivumela ifoni yakho ukuthumela imiyalo. ukubuyiselwa: "admin ok!" password123456 112233 //shintsha iphasiwedi 123456 ngoba 112233. Khetha iphasiwedi 6 dígitos begin112233 //Retorna: "begin ok!" GPRS112233 // Ibuyisa: "GPRS OK!" adminip112233 193.193.165.166 20558 APN112233 smart.m2m.vivo.com.br up112233 vivo vivo //Retorna: "user,iphasiwedi kulungile!" fix030 s *** n112233
njengoba ngasho, ngenhla Ngangivame GPS-Trace Ukucushwa + M2m bukhoma. ngezansi, Ngiyakushiya ngomumo ezinye inhlanganisela izilungiselelo, uma ukhetha enye iseva ibalazwe nomunye yenethiwekhi (chip). Sinezibonelo eziyisithupha, khetha eyodwa kuphela! Setha ukuthi ukusebenzisa i-GPS-Trace, TrackerHome noma CorvusGPS futhi, kusuka mobile wakho, thumela imiyalezo ye-SMS okulandelayo khukhwini wakho enombolweni chip Tracker sika:
1)GPS-Trace + M2m bukhoma
up123456 uyaphila uyaphila
2)TrackerHome + M2m bukhoma
3) CorvusGPS + M2m bukhoma
begin123456 Kwenza kabusha endaweni zonke isethingi okuzenzakalelayo ifektri
GPRS123456 Setha Tracker ngoba imodi ye-GPRS (okuzenzakalelayo kuyinto SMS). Lokhu kubangela imiyalezo ethunyelwe idluliselwe server kwi-inthanethi esikhundleni imiyalezo (SMS)
APN123456 tim.br Imisa i-APN for GPRS yakho. Igama ACESS Point (I-APN) It ikuvumela ukuba ukuxhuma ku-Inthanethi wakho wesevisi. Lokhu kulungiselela incike chip ukuthi usebenzisa. Ungakwazi uthintane lolu hlu zonke-APN: https://www.followmee.com/APNList.aspx
adminip123456 202.104.150.75 9000 Imisa umhlinzeki umnyango IP kanye namabalazwe. Kufanele ukhethe ukusebenzisa GPS-Trace, TrackerHome noma CorvusGPS, ngoba ngamunye has IP ethize zalo / port.
Ithimba iqembu up123456 Setha igama lomsebenzisi nephasiwedi ye-GPRS uxhumano-APN
fix030 s *** n123456 Setha isikhathi ukuthi Tracker azobika izixhumanisi. kuleli cala, ngamunye 30 imizuzwana.
esigabeni 2 – Ukubeka Amamephu Site
Ukuze uthole i-IMEI of Tracker yakho (TK103), thumela imiyalezo ye-SMS okulandelayo khukhwini wakho enombolweni chip Tracker sika:
imei123456 //123456 Kuyinto iphasiwedi ezizenzakalelayo, noma esikhundleni ngephasiwedi yakho. ukubuyiselwa: inombolo ye-IMEI
Uma ukhetha ukusebenzisa i-GPS-Trace, lokhu okulandelayo:
1. ukufinyelela http://gps-trace.com/, bese ukhetha “Ngena ngemvume” futhi “Dala i-akhawunti mahhala” ukudala i-akhawunti.
2. Ngena ngemvume http://orange.gps-trace.com/ ukuze uqale ukumiswa.
3. Chofoza inkinobho “Yenza kusebenze” futhi ugcwalise izinkambu:
– Igama: Plate noma imodeli imoto yakho,
– Uhlobo Kudivayisi: GPS103-B,
– ID kuphela: inamba ye-IMEI yakho,
– Inombolo yocingo: Inombolo chip Tracker (ex: +556198761234),
– Iphasiwedi ukufinyelela kudivayisi: iphasiwedi Tracker
4. Lapho ugcine futhi ukuvala isikrini odlule, Tracker yakho izovela ngakwesokudla. Uma yonke into ihamba kahle, isithonjana bayophendukela green, ukubonisa kumephu isikhundla Tracker yakho.
AMAZWI: ngokuqondene nami, isithonjana kwaba kuphela esebenzayo nokulandelela kuphela uvele kumephu emva kwamaminithi ambalwa, ngemva ngihamba nge imoto.
Uma uneminye imibuzo, ukubuka ividiyo Clebson Lima “INDLELA UKUBHALISA KANYE Tracker TK103 303 CHA SITE DA ORANGE”:
kukhona, okwamanje, isicelo kumadivayisi eselula etholakala ku- -Google Play e iOS.
Uma ukhetha ukusebenzisa TrackerHome, lokhu okulandelayo:
1. ukufinyelela http://www.gpstrackerxy.com/, bese ukhetha server1 bese uchofoza “Register” ukudala i-akhawunti (Thola i-IMEI ngokuthumela i-SMS ku-Tracker yakho nge umyalo “imei123456”).
2. Ngena ngemvume bese uchofoza imenyu “Izilungiselelo zohlelo> Ukuphathwa Terminal” ukwengeza Tracker yakho.
3. Chofoza inkinobho “Engeza” futhi ugcwalise izinkambu:
– IMEI Cha: inamba ye-IMEI yakho,
– Igama: Plate noma imodeli imoto yakho, e
– Model: Khetha Track inketho
4. Lapho ugcine futhi ukuvala isikrini odlule, Tracker yakho izovela ohlangothini lwesobunxele. Uma yonke into ihamba kahle, omunye ibhola isithonjana uphendulela oluhlaza, ukubonisa kumephu isikhundla Tracker yakho.
Uma ukhetha ukusebenzisa CorvusGPS, lokhu okulandelayo:
1. ukufinyelela https://corvusgps.com/ futhi ukwakha i-akhawunti (Dala i-akhawunti Mahhala).
2. Ngena ngemvume bese uchofoza “GPS Izilandeleli”.
3. Engeza Tracker yakho (Tracker) ukuchofoza “Faka okusha GPS Tracker”:
– Khetha idivaysi, ngokuqondene nami, a TK103
– Khetha igama idivayisi, kungaba ukwakheka noma ilayisensi ipuleti
– Faka inombolo ye-IMEI of Tracker yakho
(Thola i-IMEI ngokuthumela i-SMS ku-Tracker yakho nge umyalo “imei123456”)
4. Ngemva ngokungeza Tracker yakho, chofoza ku “Bonisa kwimephu” futhi silungele, Libonisa ibalazwe futhi isikhundla sombuso Tracker yakho (imoto).
Iwebhusayithi esemthethweni CorvusGPS uthola Lencwadzi yeticondziso para TK102 e TK103 GPS Tracker.
Bobabili amasayithi futhi inikeze ezinye izilungiselelo ezithakazelisayo, kuhlanganise izinhlobo ezahlukene amabalazwe.
OKUBALULEKILE: Kunconywa, emva ukumisa, umqulu 5 a 15 amaminithi ne imoto kuphela lula ukuhlonzwa kwalokho Tracker amaseva imephu (bamba / ukuthumela idatha).
ukulalela / Gada
Ungakwazi ukushiya Tracker endleleni “Gada” ukuzwa konke emhlabeni.
unike amandla ukulalela
Thumela umyalo SMS ngezansi bese ulinda impendulo “Gada Ok”. ngemva kwalokhu, Ukushaya ucingo ukuze inombolo yocingo Tracker futhi ungakwazi ulalele imvelo.
futhi okwamanje, uma usebenzisa uhlelo real-time njengoba WEB TrackerHome noma CorvusGPS, ukwenza:
Lesi sici ezithakazelisayo, ngawe bayaziswa uma imoto endaweni :)
Vumela ukunyakaza isexwayiso
Thumela umyalo SMS ngezansi bese ulinda impendulo “Move Ok”. Uma noma iyiphi inhlangano, uthola i-SMS “Hambisa” nge izixhumanisi.
Khubaza ukunyakaza isexwayiso
M2m chip ifoni – Umshini ukuze Machine
Ungasebenzisa ezivamile chip esitokisini packet data, kodwa angithandi ukweluleka, kubiza kakhulu, kokubili kuqala njengoba uhlelo lwenyanga. TIM, isibonelo, ukugcina chip izobiza ku $ isilinganiso 35,00.
Uma ufuna ukugcina chip ezishibhile e Tracker yakho, M2m Kuyinto Akungabazeki ukhetho best. Kulesi samuntu (M2m) uzochitha ngokwesilinganiso $ kuphela 10,00. Njengoba M2m ngokuvamile akezi nge-SMS iphakethe (idatha kuphela), kukuhle ukuthi wenze izilungiselelo abakhasi kokuqala nge chip ukuthi ine-SMS, bese kuba ngu-ushintshashintsha. I ihlolwe futhi wasebenza kahle kakhulu.
Uthola emakethe khulula Chip Vivo Unlimited M2m Ukuze Tracker (uhlelo lwenyanga) a $ R 10,00.
Imininingwane zokungena: 179201
5 Juni 2016 Taylor Lopes	APN, GPRS, GPS, Tracker, tk103, tk103a, Tracker
38 Izibuyekezo “Setha i-GPS Tracker ukufinyelela amabalazwe ku-inthanethi”
Daniel Moreira Gomes wathi:
Ngithanda ukusebenzisa uhlelo GPS Tracker V.2.0.0.2 ukuphatha TK103 yami.
Thumela Ip uxhumano yami, Ukuqondisa kabusha umnyango 9000, konke kulungile.
Kodwa uma ungeza Tracker lo myalezo olandelayo ibonakala “IMEI invalidation”.
Kusukela kakade ngiyabonga.
18 October 2016 ukuze 15:46
Reinaldo Martins wathi:
Ngithande usizo lwakho mayelana Tracker GPS nokunye Ngibhala kuwe, Ngenze iphutha futhi ususe IMEI ukuthi kwaba emsamo njengoba ufundise, kodwa manje ngizama ukusebenzisa kabusha i-platform kanye uthi kule akhawunti ukhona, ngiyaqinisa ngokubongwa enginakho ukususa iseva, ungangisiza. ngiyabonga
2 November 2016 ukuze 13:00
Kanjani I susa drive ukuthi akasebenzisi ngaphezulu ?
19 December 2016 ukuze 9:14
Umngane akazange njengoba yabonisa kodwa mina faka indawo nemoto akuyona kumephu kuphela ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka…kanjani? Lokhu kuye kwaphoqelela
15 July 2017 ukuze 14:24
Imoto akuyona olwandle lapho kufanele kube endaweni ukuthi GPS itholakala.
Ngempela lena inkinga akekho wachaza noma ungazi, Cishe kuphela Chinese owadala kule sayithi ukwazi.
Ngaba nenkinga efanayo, amanye amavidiyo efundisa indlela ukubhalisa GPS kodwa umkhuba akwenzeki lutho enikeza ukuqonda ukuthi indawo kokulandela akusebenzi, kanye kokuba informaçãos ambalwa singabi nalo okokufundisa usizo akusho ukugxekana yisiphi isinyathelo ngisho GPS.É eliyingozi.
4 August 2017 ukuze 22:33
roberto martinez wathi:
Nginenkinga nge-IMEI, Angamukeli kuyo athi akulungile futhi kakade Cale nge 3 imeis kakhudlwana futhi esingakaze sidonse, Ngimsize ukuthola ukuthi yini inkinga.
28 August 2017 ukuze 16:52
Antonio Gama wathi:
ukuthumela umlayezo imei123456 Tracker ukuze IMEI lesifanele bese kuphela ukurekhoda kwesokudla
28 September 2017 ukuze 0:21
Ngilandele zonke iziqondiso. Imiyalo sms abasebenza well.However Nginenkinga nge-GPRS kokulandela. Kuwebhu / uhlelo lokusebenza i ubone imoto ngaphandle kwe-intanethi. ku ehlola isimo elikushoyo GPRS kuvuliwe. othile usizo
19 September 2017 ukuze 11:58
Musa ukukhasa isicelo ngoba ehluleka kakhulu. ukwenza kube ngokusebenzisa iwebhusayithi nomkhiqizi futhi ezingcono kakhulu futhi uthumele izilungiselelo kahle ngaphambi kokusebenzisa indawo.
28 September 2017 ukuze 0:10
Siyakuhalalisela ngenxa incazelo… okwami ​​lalilihle impela….
22 September 2017 ukuze 11:16
Javier Carrillo wathi:
Mina banenkinga efana neyami, konke iyasebenza kakhulu kodwa hhayi eboniswe ebalazweni, GPRS OFF, ngisho noma isigijimi ilungile ukuze kusebenze (imibi: GPRS123456 futhi waphendula GPRS OK!).
Ngiyinika kanjani kungayilungisa?
Mina banenkinga efana neyami, konke kahle kodwa alibonisi ke kumephu, GPRS OFF, ngisho nalapho i-SMS ilungile (uml: GPRS123456, futhi waphendula GPRS OK!)
Ngingakwazi kanjani siyixazululile?
29 September 2017 ukuze 13:10
Mina banenkinga efana neyami ngqo…
3 October 2017 ukuze 0:14
Ukuzalwa Welvisley wathi:
sawubona, yami uphawu isikhathi ezindaweni ukuthi azibanga
13 November 2017 ukuze 12:47
Sawubona , Ngithathe unenkinga yokuxhuma tk Tracker 103, wenza igxathu negxathu , Ngahlola ifoni , kodwa lutho lungaxhumi kusayithi , kakade imiyalo by sms blz, ta kulungile, okusebenza wonder.
10 February 2018 ukuze 21:20
Nginibekela konke usebenzisa lokho okukhethile futhi isebenza kahle.
15 February 2018 ukuze 9:54
Luciano Marquetti wathi:
sawubona, Engizama ukubhalisa Tracker yami, kodwa lithi IMEI ayivumelekile, Ngathatha inombolo SMS ne Tbm inombolo efanayo kufika ebhokisini..
Ngidinga ukuvula into ?
31 Mashi 2018 ukuze 16:11
Ngingathanda ukwazi IP Tracker ikhaya ziyafana Ngiyambonga tk303.desde
11 April 2018 ukuze 9:55
amaMidiyan Ribeiro wathi:
sawubona, ratreador yami ayiphenduli kodwa ayikho nge sms osemusha, Angikwazi khubaza noma unike amandla futhi lutho kodwa, Ngifika kanjani ukumbuyisela impendulo, UKhosi sms uthole lutho.
26 April 2018 ukuze 9:42
sertamente opharetha ivinjiwe ukuthumela sms Tracker chip
18 April 2019 ukuze 15:08
Val Max wathi:
Umngane angathanda ukubeka 30 zomsebenzi kwirejista olulodwa e-Orange. Ngingaqinisekisa kanjani? Une iyiphi i-akhawunti ikhokhwe?
24 July 2018 ukuze 15:31
Ngizama ukubeka yami Tracker IP kusayithi futhi ibika ukuthi lapho isivele iphasiwedi bhalisiwe. kanjani ngizama ukulithola??
24 August 2018 ukuze 16:20
NGUNANCY VALLADARES wathi:
KUHLE USUKU enginakho YAMI IKHAYA Tracker Tracker KANYE INGABE esisebenza kahle libe luhlaza kodwa mina nje yambamba UNIT KANYE NO OTHER wadubula NGOBA bona HLALE kumpunga ?
Uma une namabhalansi
12 September 2018 ukuze 10:52
Juni Moreira wathi:
Kuhle kakhulu incazelo yakho! Ngenza lapha futhi konke wasebenza. ngiyabonga
11 December 2018 ukuze 0:45
mario chavez wathi:
sawubona ebusuku okuhle ungase ungisize usethe GPS yami Tracker futhi njengoba ngingenile mexico nendawo engithumelela Chinese njengoba ngenza i-ED e Mem Spanish
4 January 2019 ukuze 1:23
antonio leandro AmaKhosi wathi:
indlela vala stop, imoto emuva league.
? 123456 ingxubevange imoto.
29 January 2019 ukuze 22:13
18 April 2019 ukuze 15:06
DENIS Herlan wathi:
sawubona, Angikho UKUTHOLA BHALISA 5 Tracking CHA ORGAGE, KE Awazi ukuthi iyiphi i-TYPE DEVICE UKUSETSHENZISWA, Tracker YAMI futhi TK-103 B, NGIYABONGA
26 February 2019 ukuze 15:53
Sawubona, ami TK103 wase ubhalisela i-Orange njengoba GPS103-B, sekube Thumela. Lapha isebenza, kuhlanganise nokusetshenziswa kwazo App mobile (MAHHALA). wakhuluma!
5 Mashi 2019 ukuze 18:56
Ana Lucia wathi:
ubusuku obuhle, Ngenza zonke ukucushwa njengoba kuchazwe…. yonke into iyasebenza nje kwesokudla… kodwa….
nsuku zonke , asikho isikhathi 21:00 ukuze 00:00, Phiko kusayithi ngaphandle kwe-intanethi…. ngemva kwalokhu emuva isikhathi umsebenzi ngokuvamile…. Ngazi Tracker isebenza kulungile, It iyaphendula nge-SMS.
Noma ubani owake walikhuluma ngayo le nkinga ? Ziyazi indlela yokuxazulula ?
12 Mashi 2019 ukuze 20:37
Admilson Nahmias wathi:
Ngaba nenkinga efanayo; akafumananga lutho kwi-inthanethi, kuze uchwepheshe kwangisiza, vele uthumele i-SMS okulandelayo ukuze Tracker yakho:
isikhathi zone123456 0
Ukukhumbula ukuthi inani 1 a 6 Kuyinto iphasiwedi ezizenzakalelayo, uma ushintshe, ukubeka iphasiwedi yakho
26 May 2019 ukuze 21:26
futhi di ukubhalisa ithimba Tracker yami ekhaya kodwa akazivumeli ngiphume pc uthi uma mina ikhasi siqu futhi akakwazi ukugcina iyunithi ukusuka lapho
5 April 2019 ukuze 21:30
wilson ferreira junior wathi:
GPS 303 GSM GPRS Tracker 303g ejwayelekile usebenza nsuku zonke kuze kube 21 amahora esivamile lapho ngakho phakathi nobusuku emuva zap yami 63 9*******8
18 Juni 2019 ukuze 15:55
sawubona….Ngiye iseva ekhethiwe duda..porque 1 zu TrackerHome….ukuthi ukukhethwa kule seva kumele….ngiyabonga
4 September 2019 ukuze 10:12
Sawubona, ungazama omunye iseva. Ngathi server1, ngoba kwaba iseva ezathatha isivivinyo futhi lokho kwasebenza. hug
8 September 2019 ukuze 17:24
Sawubona GPS yami livela olwandle blue zonke Tracker akusho umsebenzi ekhaya ukujabulisa umuntu owazi ikhambi. Zonke sms ukwenza kahle kodwa platform kungaqali umsebenzi
9 January 2020 ukuze 9:24
Luis A. Tinoco wathi:
Mina isidingo usizo, futhi ngifuna misa bese ukubuyisela kude kude, ngaphandle nge-SMS, kungenxa sewebhu.
13 January 2020 ukuze 20:18
Goiania Makeup wathi:
Konke kukuqukethwe okuhle. Siyabonga ngokunikeza imininingwane engaka
ngale ndlela yesintu. Ngangimthanda.
28 Mashi 2020 ukuze 4:44
rajitha arangala wathi:
Lapho ngifaka inombolo ye-IMEI yokubhaliswa (http://www.gpstrackerxy.com/Login.aspx?Server=2) . Izonikeza umlayezo wephutha i-IMEI isivele isetshenzisiwe. Okufanele ngikwenze ukuze ngifike le nkinga.
18 September 2020 ukuze 22:08
Ilungiselela i-DDNS ukuthi ihambisane nemodemu + umzila Khohlwa i-No-IP ne-DynDNS! Yenza i-router yakho isebenze kumodi yebhuloho futhi ulungiselele ama-DDNS nge-DNS-O-Matic. Problema Aviso: Lokhu okuthunyelwe kunemiqondo ethile yezobuchwepheshe engeke ilungiswe. Konke kuqale ngenkathi ngithola ku-opharetha u-Oi um ...
Imininingwane © 2021 taylorlopes.com kusukela Oct 2012, 2.968.878 ukufinyelela